ယူတို့ဘ၀မှာရှိနေပြီလား ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုး… – Trend.com.mm
Posted on March 19, 2019 March 19, 2019 by Noel
ဘ၀မှာ သူငယ်ချင်းတွေမရှိရင် အတော်လေးကိုပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းနေမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ကိုယ်နဲ့ အေးအတူပူအမျှရှိနေပေးမယ့်သူတွေဆိုရင်
တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ပြီးတော့ သင့်ဘ၀မှာ ဒီလိုသူငယ်ချင်း type တွေလည်း ရှိနေသင့်ပါတယ်။
Party ဆိုတာနဲ့သွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေသူ၊ဘယ်နေရာသွားမယ်။ဒီနေရာသွားမယ်ဆိုပြီး အမြဲတက်ကြွလန်းဆန်းနေတဲ့အပြင် သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ သူ့အပျော်တွေကူးစက်ပျော်ရွှင်စေမယ့်သူငယ်ချင်းမျိုးပေါ့။အသက်တွေကြီးလာလို့ ပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါ သူမဟာ သင့်ဘ၀ကိုအသက်ဝင်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါလားဆိုပြီး တွေးတိုင်းကြည်နူးမိနေမှာအမှန်ပါပဲ။
ခရီးတစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင် အမြဲတန်းအသင့်ဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သင့်ဘ၀မှာရှိနေပြီလား? သူငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက်အားလုံးမဆုံရင်တောင်
သင်နဲ့အတူ ဘယ်သွားသွားလိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လောက်ရှိရင်ကို ဘ၀မှာပြည့်စုံလုနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ။
ဘယ်နေရာမှာ ဈေးဝယ်လို့ကောင်းတယ်။ဘယ်နေရာမျိုးမှာ ဈေးတွေချထားတယ်။ဘယ်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကို သိပြီး အမြဲအကြံဥာဏ်ပေးတတ်တဲ့
သူငယ်ချင်းမျိုး၊သင်ဘာလိုလို သူ့ဆီက အကြံဥာဏ်တောင်းလို့ရတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးလည်း ဘ၀မှာလိုအပ်ပါတယ်။
ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ရှေ့က ဦးဆောင်ပြောဆိုနိုင်တဲ့သူငယ်ချင်းမျိုး၊မကြောက်မရွံ့နဲ့ ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးဟာ သင့်အနားမှာ
အမြဲတမ်းရှိနေမယ့်သူမျိုးပါ။ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင် သူမက ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းမျိုး
ရွယ်တူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူမကတော့ အမေတစ်ယောက်လိုလိုက်ဆုံးမနေတတ်တယ်။သူမကိုယ်တိုင်အတွက်သာမက သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း
ဂရုစိုက်ဖို့မမေ့ဘူး။ဥပမာ ခရီးတိုလေးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်တောင် သူမက အဆာပြေမုန့်တွေ၊ရေတွေ၊ဆေးတွေ စသဖြင့်လိုအပ်တာတွေကို အရင်ဆုံး
ပြင်ဆင်ထည့်မယ့်သူမျိုးပေါ့။အေးတဲ့အခါ အနွေးထည်လေးယူသွားဖို့ သူမပြောမယ်။တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆို သူမက အရင်ဆုံးပြေးလာမယ်။အဲ့ဒီလို ဂရုစိုက်
ဒီလိုသူငယ်ချင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့သင်က တကယ့်ကို ကံကောင်းတဲ့သူပါပဲ။
ဘဝမှာ သူငယျခငျြးတှမေရှိရငျ အတျောလေးကိုပငျြးရိငွီးငှဖှေ့ယျကောငျးနမေယျထငျပါတယျနျော။ကိုယျနဲ့ အေးအတူပူအမြှရှိနပေေးမယျ့သူတှဆေိုရငျတော့ ပိုကောငျးတာပေါ့။ပွီးတော့ သငျ့ဘဝမှာ ဒီလိုသူငယျခငျြး type တှလေညျး ရှိနသေငျ့ပါတယျ။
Party ဆိုတာနဲ့သှားဖို့အသငျ့ဖွဈနသေူ၊ဘယျနရောသှားမယျ။ဒီနရောသှားမယျဆိုပွီး အမွဲတကျကွှလနျးဆနျးနတေဲ့အပွငျ သူငယျခငျြးတှကေိုပါ သူ့အပြျောတှကေူးစကျပြျောရှငျစမေယျ့သူငယျခငျြးမြိုးပေါ့။အသကျတှကွေီးလာလို့ ပွနျတှေးကွညျ့တဲ့အခါ သူမဟာ သငျ့ဘဝကိုအသကျဝငျအောငျဖနျတီးပေးခဲ့ပါလားဆိုပွီး တှေးတိုငျးကွညျနူးမိနမှောအမှနျပါပဲ။
ခရီးတဈခုကိုသှားမယျဆိုရငျ အမွဲတနျးအသငျ့ဖွဈနတေဲ့ သူငယျခငျြးတှေ သငျ့ဘဝမှာရှိနပွေီလား? သူငယျခငျြးအုပျစုလိုကျအားလုံးမဆုံရငျတောငျသငျနဲ့အတူ ဘယျသှားသှားလိုကျဖို့အသငျ့ဖွဈနတေဲ့သူငယျခငျြးတဈယောကျလောကျရှိရငျကို ဘဝမှာပွညျ့စုံလုနီးပါးဖွဈနပေါပွီ။
ဘယျနရောမှာ ဈေးဝယျလို့ကောငျးတယျ။ဘယျနရောမြိုးမှာ ဈေးတှခေထြားတယျ။ဘယျမှာဘာရှိတယျဆိုတာကို သိပွီး အမွဲအကွံဉာဏျပေးတတျတဲ့သူငယျခငျြးမြိုး၊သငျဘာလိုလို သူ့ဆီက အကွံဉာဏျတောငျးလို့ရတဲ့သူငယျခငျြးမြိုးလညျး ဘဝမှာလိုအပျပါတယျ။
ယုံကွညျခကျြရှိရှိနဲ့ရှကေ့ ဦးဆောငျပွောဆိုနိုငျတဲ့သူငယျခငျြးမြိုး၊မကွောကျမရှံ့နဲ့ ဘာမဆိုရငျဆိုငျဖို့အသငျ့ရှိတဲ့သူငယျခငျြးမြိုးဟာ သငျ့အနားမှာ အမွဲတမျးရှိနမေယျ့သူမြိုးပါ။ကိုယျ့သူငယျခငျြးကိုထိခိုကျလာမယျဆိုရငျ သူမက ရှကေ့နေ မားမားမတျမတျရပျတညျပေးတတျတဲ့သူငယျခငျြးမြိုး သငျပိုငျဆိုငျထားပွီလား?
းရှယျတူတှဖွေဈတယျဆိုပမေဲ့လညျးသူမကတော့ အမတေဈယောကျလိုလိုကျဆုံးမနတေတျတယျ။သူမကိုယျတိုငျအတှကျသာမက သူငယျခငျြးတှကေိုလညျးဂရုစိုကျဖို့မမဘေူ့း။ဥပမာ ခရီးတိုလေးတဈခုသှားမယျဆိုရငျတောငျ သူမက အဆာပွမေုနျ့တှေ၊ရတှေေ၊ဆေးတှေ စသဖွငျ့လိုအပျတာတှကေို အရငျဆုံးပွငျဆငျထညျ့မယျ့သူမြိုးပေါ့။အေးတဲ့အခါ အနှေးထညျလေးယူသှားဖို့ သူမပွောမယျ။တဈခုခုဖွဈပွီဆို သူမက အရငျဆုံးပွေးလာမယျ။အဲ့ဒီလို ဂရုစိုကျကွငျနာတတျတဲ့သူငယျခငျြးမြိုးလညျး သငျ့ဘဝမှာလိုအပျပါတယျ။
ဒီလိုသူငယျခငျြးတှပေိုငျဆိုငျထားရငျတော့သငျက တကယျ့ကို ကံကောငျးတဲ့သူပါပဲ။
ဇာတ်ကားအသစ်အတွက် ဇာတ်ညွှန်းစဖတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ Han Ji Min နဲ့ Jung Hae In